Dakhliga hawada ka soo gala dalka oo u kordhi doona 5 milyan doolar bishii - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dakhliga hawada ka soo gala dalka oo u kordhi doona 5 milyan doolar bishii
Dawlada Somaliya intii ay la soo wareegtay hawada dalka oo lacag malaayiina lagu cunaayay Kiiniya iyo caasimadaha kale e adduunka waxa bishii soo gasha lacag 2 mliyana sida uu sheegay khabiir ka shaqayn jirey laanta hagta diyaaradaha dulmara dalka.
Khabiirkan bartey hagida diyaaradaha ayaa qarxiyay in xilligii ay gacanta ku haysay qaramada midoobey in bishiiba si raaxo u jaqi jireen lacag laba milyana oo saafiya. Lacagtaas badankeeda waxa shaqaalaha cadaanka ah ka dhisteen daaro dhaadheer, waana ta keentay in la siyaasadeeyo muddo dheer.
Shaqaalaha Somalida ee joogi jirey xarunta Nayroobi u taala ayaa la siin jirey lacag anka badneyn 200 oo doolar bishii halka ajaanibta aan waxba dhaamin iyo Kiiniyaatiga ay qaadan jireen 900 ilaa 1000 oo doolar bishii sida uu sheegay khabiirku.
”Hadda diyaaradaha dulmara hawada Somaliya ayaakordhey amniga awgeed waxana ay gaareen 430 bishii halka awal ay ahaayeen wax aan gaarayn 200. Taas waxay ka dhigan tahay in markasta oo dawladnimadu sii xoogeysato uu sii kordhayo dakhliga laga heli karo hawada dalka.
Waxa aad loo kordhiyay xarunta laanta hawada ee magaalada Muqdisho oo laga dhigey mid ay yaalaan qalab casriya oo la mida kuwa yaala Yurub. ”Runtii qalabka ay dawlad rakibayso waa mid aan Afrika oolin oo la mida kuwa Yurub yaala ayuu yiri khabiirku.
”Waxase nasiib daro noqon doona in lacagta ka soo gasha hawada dalka qaar ka mida gacanta looga geliyo maaul jufeedyada sida hadda la sheegayo ee ay ku fiican tahay in dib loogu dhiso madaaro cusub ayuu yiri Cali Calasow.